Paul Biya (wuxuu ku dhashay Paul Barthélemy Biya'a bi Mvondo; 13 Feebarwari 1933) waa siyaasi reer Cameroon ah oo u soo noqday Madaxweynaha Cameroon illaa 6 Noofambar 1982.
Muwaadinka ku dhashay koonfurta Cameroon, Biya wuxuu si xawli ah sare ugu kacay xafiis ahaan markii loo eego Madaxweyne Ahmadou Ahidjo 1960-kii, isagoo u ahaa Xoghayihii Guud ee Madaxtooyada laga soo bilaabo 1968 illaa 1975 ka dibna wuxuu ahaa Raiisel Wasaaraha Cameroon intii u dhaxeysay 1975 ilaa 1982. iscasilaadii lama filaanka ahayd ee 1982kii iyo awoodii isku dhafan ee 1983–1984 isku day afgambi ah oo uu baabi'iyay dhamaan wixii la tartamayay.
Nidaamkiisa waxaa taageera Faransiiska, oo siiya hub waxayna tababartaa xooggeeda. Faransiisku waa kan ugu horreeya maalgashadayaasha shisheeye, ka horreeya Mareykanka. Boqol iyo shan kaabayaal Faransiis ah waxay ku yaalliin dhammaan waaxaha muhiimka ah (saliida, alwaaxyada, dhismaha, taleefanka gacanta, gaadiidka, bangiyada, caymiska, iwm.).
Biya waxay soo bandhigtay dib-u-habaynno siyaasadeed iyada oo loo eegaayo nidaamka xisbiyada 1980-yadii. Cadaadis daran awgiis, wuxuu aqbalay soo-jeedinta siyaasada xisbiyada badan bilowgii 1990-yadii. Wuxuu ku guuleystey doorashadii madaxtinimada ee 1992 isagoo leh 40% cod, hal-cod oo codeyn ah waxaana mar labaad dib loo soo doortay 1997, 2004, 2011 iyo 2018. Siyaasiyiinta mucaaradka iyo dowladaha reer Galbeedka waxay ku eedeeyeen inay u codeeyeen wax isdaba marin iyo musuqmaasuq mid kastoo ka mid ah munaasabadaha. Meelo badan oo madax-bannaan ayaa bixiyay caddeyn muujineysa inuusan ku guuleysan doorashooyinkii 1992, iyo in doorashadii xigtey ay ku soo badatay musuqmaasuq.
Muddadii Biya ee uu madaxweynaha noqday waxay bilaabatay 6 Noofambar 1982, taasoo ka dhigaysa madaxweynaha labaad ee ugu mudada dheer qaarada Afrika (kadib Teodoro Obiang oo u dhashay dalka Equatorial Guinea), oo ah hogaamiyaha ugu cimriga dheer boqortooyada adduunka, iyo kan ugu da’da weyn ee madaxweynenimada. Afrika, markay ahayd 87 jir.
Biya waxay ilaalinaysay xiriirka dhow ee Cameroon ay la leedahay Faransiiska, mid ka mid ah xukumadihii hore ee Cameroon ee gumeystaha.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_Biya&oldid=205349"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 26 Agoosto 2020, marka ee eheed 14:34.